Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » TEMPORARY PLACE » » Unknown Discussions » Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem]
1 Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 14th May 2010, 1:12 pm
ကိုညီနေမင်းရဲ့ site ကနေဖတ်လာတာပါ။
Thai ကကောင်တွေက window ကို ကိုယ်ကျစေချင်တဲ့ အချိန်မှာ ကျအောင်လုပ်ထားကြတယ်တဲ့။
ပြီးတော့ window ပြန်တင်လို့ မရအောင်လုပ်ထားတာတဲ့။
အဲဒါဘယ််လိုလုပ်တာလဲ။ [You must be registered and logged in to see this image.] သိရင်ဖြေပေးကြပါနော်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
ကိုညီနေမင်းက မမေးနဲ့ ဆိုလို့ ဒီ site ကအစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ ကို ပူဆာရတာပါ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 14th May 2010, 4:13 pm
ကျစေချင်တဲ့အချိန် Format တီးလိုက်ပေါ့။ ဘာများခက်လို့တုန်း။
ပြီးတော့ နောက်ကို ခေါင်းစဉ်လေး တပ်ပေးပါ။ ဘာမှန်းမသိတော့ ဘယ်သူကဖတ်မှာလဲ။
3 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 14th May 2010, 4:23 pm
YanNaing wrote: ကိုညီနေမင်းရဲ့ site ကနေဖတ်လာတာပါ။
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ Program တစ်ခုခုရေးထားတယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ - Bios Date ကိုကြည့်မယ်။ ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာ Program ကိုစမယ်။ System Root ထဲက ဘယ် File တွေကိုဖျက်ပစ်မယ်။ စသဖြင့် Program ရေးထားပုံရပါတယ်။ Windows ပြင်တင်လို့မရအောင် ဆိုတာကတော့ ဥပမာ - RAM ကိုဖျက်တဲ့ Code တွေထည့်ရေးမယ်။ HDD ကိုဖျက်တဲ့ Code တွေထည့်ရေးမယ်။ လတ်တလောတော့ တင်လို့မရဘူးပေါ့။ ပစ္စည်းဝယ်လဲပြီးရင်တော့ ရမှာပေါ့။
ဥုံဖွ.....Mr. ဘယ်သူ တင်ထားသော ယခုဝင်းဒိုးကြီးသည် ဘယ်နှစ်ရက်နေ့တွင်ကျစေသော်ဝ်။ မည်သူပြန်တင်တင်မရပါစေသား။ (ဥံု...ဥံု...ဥံု....)10000
4 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 14th May 2010, 7:06 pm
window ကျအောင် လုပ် တဲ့ code ဆိုတာတော့ ကျနော် လက်ခံပါတယ်.... window ကိုပြန်တင်လို့ မရအောင် program နဲ့ hardware ကိ်ု ဖျက် တယ် ဆို တာတော့ သိပ်ပြီး လက်ခံ လို့မရဘူး ခင်ဗျာ......အဲဒီ ကောင် က hardware ရဲ့ firmware အပိုင်းကို တိုက်တာ လား.....
5 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 14th May 2010, 7:47 pm
Hardware ကို ပျက်စေတာပါ အစ်ကို မယုံရင် Looping ၁၀၀၀ ပတ်ပြီး 100 MB File ပေါင်း ၁၀၀၀ ကို 1GB PanDrive ထဲကို ထိုးထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ Copy ကူးလိုက် ၊ Overwrite လုပ်လိုက် ၊ ပြန်ဖျက်လိုက်။ အဲဒီ့ Function မျိုးတွေရေးကြည့်လေ။
6 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 14th May 2010, 8:01 pm
ရတယ်.... ညီလေး.... အကို မစမ်းတော့ဘူး..... [You must be registered and logged in to see this image.] ... ညီလေး ပြော တာ နဲ့ အကို ရဲ့ pen drive လေး ကို ကြည့်ရတာ ၀မ်းနည်းနေတဲ့ ပုံပေါက်နေလို့...... [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 14th May 2010, 8:22 pm
ဟဲဟဲ။ စမ်းကြည့့်ပါဦးဗျ။ ပြောမယုံ ၊ ကြုံဖူးမှသိတဲ့။ စကားပုံတောင်ရှိတယ်လေ။
ကျွန်တော် ပြောတာ လက်ခံနိုင်လောက်သေးပါဘူး။ ဘာမှလည်းသက်သေမှမပါတာ။ ကိုယ်တိုင်သာစမ်း။
မရရင် ပြန်လာငြင်း။ ဟီးဟီး...
8 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 15th May 2010, 8:58 am
သြော် ဒါနဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးဘာလေးတပ်ပါဦးဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ [You must be registered and logged in to see this image.]
ွှTitle ထဲမှာကျွန်တော် ရေးထားတာက ခေါင်းစဉ်မဟုတ်ဘူးလား။
9 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 15th May 2010, 4:02 pm
water wrote: window ကျအောင် လုပ် တဲ့ code ဆိုတာတော့ ကျနော် လက်ခံပါတယ်.... window ကိုပြန်တင်လို့ မရအောင် program နဲ့ hardware ကိ်ု ဖျက် တယ် ဆို တာတော့ သိပ်ပြီး လက်ခံ လို့မရဘူး ခင်ဗျာ......အဲဒီ ကောင် က hardware ရဲ့ firmware အပိုင်းကို တိုက်တာ လား.....
Hallmark Virus ကိုမကြုံဖူးသေးဖူးထင်တယ်။ Hallmark Virus က စက်ရဲ့ RAM ကို တစ်စစီဖြစ်အောင်လုပ်တာပါ။ အဲဒါလေးကြံုဖူးသွားရင် လက်ခံသွားပါလိမ့်မယ်။
10 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem] on 15th May 2010, 5:49 pm
YanNaing wrote: သြော် ဒါနဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးဘာလေးတပ်ပါဦးဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ [You must be registered and logged in to see this image.]
ဆရာလေး ၊ Title က ဆရာလေး တပ်တာသေချာလို့လား
Description မှာ ရေးထားတဲ့စာကို ကျွန်တော်မျိုး Ctrl + C & Ctrl + V လုပ်ထားရတာပါခင်ဗျာ...
ဆရာလေး Title မှာ [Problem] လို့ဘဲပါပါတယ်။
ခု Title မှာ ကျွန်တော့် လက်ရေးကြီးလေ။ ဆရာလေး လက်ရေးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်လက်ရေးကိုယ် မှတ်မိဘူးလားဗျ
11 Re: Window ကျစေချင်လို့ပါ။ [Problem]